Ahụike | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Udia “Levomekol” n’oge di ime
Site na inweta onodu ohuru nke nwanyi di ime, onye nnọchi anya nwoke na nwanyi adighi ike n’egharia na atughari uzo ndu ya. Yabụ, imirikiti ndị nne na-atụ anya na-amalite iji nlezianya nyochaa nri na ọdịmma ha. Ma, dika…
Arụrụ sịga "Pons": ntuziaka maka ojiji, atụmatụ, nyocha
Ọtụtụ ndị na-ese anwụrụ ọkụ, na-achọ ime ka omume ha bụrụ ihe nchebe dịka ọ nwere ike ịchebe onwe ha na ndị ọzọ, na-echigharịkwuru ngwaọrụ eletrik. Taa, usoro a amachaghị nke ọma na-agbwanyewanye elu. Akwa ...
Ebee ka ị ga-enweta nyocha ahụike maka ọrụ? Ọdịiche dị n’etiti ụlọọgwụ ọha na nkeonwe
Taa, ọtụtụ amaghị ebe ha ga-aga nyocha ahụike maka ọrụ. N’ezie, enwere naanị nhọrọ abụọ dabara na ya: ụlọọgwụ steeti na ụlọọgwụ ahụike nkeonwe. Banyere ụlọọgwụ gọọmentị ha niile nwere…
Akwara nke ala ala mmadu: nhazi, oru aka
Ọkpụkpụ aka (ụkwụ) buru nnukwu ibu dị egwu. Ọrụ ha gụnyere inye nkwado na nkwado. A na-ahụta akwara nke akụkụ ala, akwara nke ga-akọwa ya n'ụzọ zuru ezu na isiokwu a, dị ka ihe kachasị ike ...
Ọgwụ "Raunatin": gịnị na-enyere aka? Nkọwa nke Njirimara na ihe mejupụtara
Ọtụtụ mgbe, ndị dọkịta, mgbe nyochachara, na-enye ndị ọrịa ọgwụ Raunatin. Kedu ihe na-enyere ọgwụ ahụ aka ma kedu ihe ndị mejupụtara ya? N'ọnọdụ dị a isaa ka ọ dị mkpa iji ọgwụ ma nwee ike ọgwụgwọ ...
Ahụike na-adịghị mma: akpata ọbara ọbara n'etiti oge
Ahụ nwanyị bụ ihe na-adọrọ mmasị ma sie ike. N'ihi ndabere nke homonụ ahụ, mgbanwe ọnwa na-apụta na ya. Stabilitykwụsi ike nke usoro ahụ na-apụtakarị ahụike nke nwoke ma ọ bụ nwanyị mara mma. Mana oge ụfọdụ ụmụ nwanyị ga-echigharịkwuru ...
Ihe omimi nke isi: nyocha nke usoro
Ọ bụghị mgbe niile ịme nchọpụta nchọpụta dabere na mkpesa ndị ọrịa naanị, karịsịa ma ọ bụrụ na a hụrụ nsogbu n'akụkụ akwara. Studynyocha onodu ya na-enye mmetuta tomography (tomogram) nke isi. Nke a bụ otu n'ime ...
Nnyocha ọbara nke anụ ahụ (immunogram): ihe ngosi, njirimara nke ịrụ, transcript
Nnwale ọbara mgbochi bụ usoro nke ndị okacha mara na ngalaba nke ọgwụ iji chọpụta ike onye ọrịa iguzogide nnukwu ọrịa nje na nje. Nchoputa ihe omimi choputara ọkwa nke ihe nchebe mmadu, itule ogo na ...
Usoro mmega ahụ: mmega ahụ maka akwara nke ọkpụkpụ azụ. Kedụ ihe kwesịrị ime mmegharị ahụ ebe akwara dị na mpaghara cervical?
Ọkpụkpụ akwara nwa bụ otu n'ime ọrịa ndị kasị dị ize ndụ na-esite n'ike n'ike na-ezighi ezi n'ahụ ahụ. Mgbaàmà nke ọrịa a na ndị ọrịa niile fọrọ obere ka ọ bụrụ otu. Mmadu bidoro inwe mgbu n’olu, isi…
Anticholinergics: ndepụta. Usoro nke ihe anticholinergic ọgwụ
Ọgwụ Anticholinergic bụ ọgwụ na-egbochi ihe nke onye mgbasa ozi okike, acetylcholine, na ndị na-anata cholinergic. N'akwụkwọ ndị mba ọzọ, a na-akpọ ndị otu ọgwụ ọgwụ a "delirium" n'ihi ike butere delirium.…
Ọgwụ "Resorcinol": ntuziaka maka ojiji
Gini bu Njirimara ọgwụgwọ Resorcinol? Ntuziaka maka ojiji, foto na atụmatụ nke ọgwụ a ka enyere n'okpuru. Ngwakọta, ụdị arụpụtara Gịnị bụ resorcinol? Ntụziaka maka iji ya kwuru na ihe a ...
Kedu ihe bụ hypercepensive encephalopathy? Ihe kpatara, mgbaàmà, ọgwụgwọ
A na-ahụta ụbụrụ ischemia, ọrịa strok, nkụchi obi na encephalopathies dịka ọrịa siri ike. Ọtụtụ mgbe, ha na-egbu egbu. N'ime ọtụtụ ọnya ụbụrụ, encephalopathy kwesịrị inweta nlekọta pụrụ iche. Nke a bụ ìgwè buru ibu nke ọrịa. Ihe e ji mara ha bụ ...
Obninsk, Ụlọ Ọrụ Rehabilitation: nkọwa, ọkachamara, ọrụ na nyocha
Ahụike mmadụ ga-adịgide n'ọnọdụ mbụ. N'ụbọchị ndị a, ọtụtụ ndị na-eche na ọgwụ steeti alaala kemgbe nke ya. Ndị ọrịa dị otú a na-ahọrọ ịga n'ụlọ ọrụ nlekọta ahụike ...
Ọgwụ "Biltricid": analogues, ntuziaka na nyocha banyere ọgwụgwọ ahụ
Helminthiasis bụ ihe dị ize ndụ ma, ọ dị mwute ikwu, nsogbu zuru oke, nke na-enweghị ọgwụgwọ nwere ike ibute nsogbu. N'ezie, ọgwụ na-enye akụrụngwa ndị nwere ike sachapụ anụ ahụ nke nje. Otu n’ime ha…
Senna bu akwukwo ahihia nwere otutu ihe bara uru.
Ihe na 15.09.2019 11.11.2019
A na-eji ọgwụ ogwu Senna mee ọgwụ ndị mmadụ dị ka ihe ngwọta maka afọ ntachi, yana mkpochasị ọrịa, nke chọrọ ube dị nro na mkpochapụ akwara dị mfe. Na-ezo aka na ...
Nlekọta ihe mberede maka ụkwara ume ọkụ. Ọgwụ maka ụkwara ume ọkụ
Anwụ ụkwara ume ọkụ bụ ọrịa na-adịghị ala ala nke na-egosipụta mwakpo nke iku ume ma ọ bụ iku ume anwụ. Ọrịa a na-eme ma ụmụaka ma okenye. Kwa afọ ọnụ ọgụgụ ndị na-arịa ọrịa a na-amụba.…
Iwepu na obi - a ga-enwe ihe mere ị ga-eji kpọtụrụ onye ọkachamara ara.
You chọpụtala na mmiri na-apịpụta gị n’obi gị? M̀ kwesịrị ịtụ ụjọ? Ma ọ bụ eleghi anya ihe a bụ ihe nkịtị? Ihe ịrịba ama nke ụdị ọrịa nwere ike ịbụ nzipu site n’obi? Maka gị niile ...
Etu esi ewere mmanye greepu. Uru na ọghọm nke mmanụ mkpụrụ vaịn
Ruo ọtụtụ puku afọ, mkpụrụ vaịn adọtawo mmadụ. A zụlite ya n'akụkụ dị iche iche nke ụwa ma nwee ịhụnanya na-adịghị agbanwe agbanwe. O siri ike ịchọta osisi ọzọ a ga na-akpọkarị ya na abụ, akụkọ mgbe ochie na abụ. ...
Kedu ọrụ iji gbanwee agba anya?
Ihe na 15.09.2019 04.12.2019
Ugbu a, ọgwụ na-etolite ngwa ngwa. A na-elezi usoro dị ka nke na-agaghị eme ugbu a anya dị ka ihe ziri ezi. Iji maa atụ, ụmụ nwanyị nwere ike ịmụba ara ha, egbugbere ọnụ ha, gbanwee ụdị imi ha, wdg.
Ajuju 17 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 2,711.